धनुषा: नक्ट्टाझिझमा बैकल्पिक कक्षा संचालन, जान्नुहाेस कहा कति समयमा पढाइन्छ ! - हाम्रो जनकपुर
धनुषा: नक्ट्टाझिझमा बैकल्पिक कक्षा संचालन, जान्नुहाेस कहा कति समयमा पढाइन्छ !
मास्क, सेनिटाईजर र समाजिक दुरी कायम गरि कक्षा संचालनमा लाएको छ ।
हाम्रो जनकपुर / जनकपुरधाम । धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा वडा नम्बर २ नक्टाझिज ( हजरा चौक) रहेको जनता माध्यमिक बिद्यालयले बिद्यार्थीहरुको मांगलाई मध्यनजर गर्दै बैकल्पिक कक्षा संचालन गरेको हो ।
धनुषाको नक्ट्टाझिझमा बैकल्पिक कक्षा संचालनमा लाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा नेपाल सरकारले कोरोना बाट बच्न निर्धारण गरिएको मापदण्ड अनुरुप मास्क, सेनिटाईजर र समाजिक दुरी कायम गरि कक्षा संचालनमा आएको हो ।
निरन्तरको लकडाउनका कारण पठनपाठन अबरुद्व भएपछी बिद्यार्थीहरु निरुत्साहित भएका थिए । तर बिद्यालयले कक्षा संचालन गर्ने निर्णय गरे संगै बिद्यार्थीहरु उत्साहित देखिएका छन ।
बिद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापक श्याम कुमार यादबका अनुसार कक्षा १ देखि ८ सम्मका बिद्यार्थीलाई बिहान ८ बजेदेखि कक्षा संचालन गरिएको छ ।
कक्षा १ देखि ८ सम्मका बिद्यार्थीलाई एभरेष्ट युवा क्लब नक्ट्टाझिझ, शिक्षक हरिनारायन महतो को घर, वडा नं ५ को सामुदायिक भवन र अरहुल राष्र्टिय आधारभूत बिद्यालय ढल्केवरमा कक्षा संचालन गरिएको छ ।
कक्षा ९ र १० का बिद्यार्थीका लागि बिहान साढे १० बजेदेखि राष्र्टिय आधारभूत बिद्यालय नक्ट्टाझिझ-५ मा संचालन गरिएको जनकारि गराए पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।